Mkpado: b2b | Martech Zone
Otu esi eji TikTok maka ire ahịa B2B
TikTok bụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-eto ngwa ngwa n'ụwa, ma nwee ike iru ihe karịrị 50% nke ndị okenye US. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ B2C na-arụ ọrụ dị mma nke itinye TikTok iji wulite obodo ha ma na-ebuwanye ahịa karịa, were akwụkwọ TikTok Duolingo dịka ọmụmaatụ, mana gịnị kpatara na anyị agaghị ahụ ahịa azụmaahịa na-azụmaahịa (B2B). TikTok? Dị ka akara B2B, ọ nwere ike ịdị mfe ịkọwapụta
Fraịde, Machị 18, 2022 Fraịde, Machị 18, 2022 Douglas Karr
Onye ahịa Ọdịnaya Elite mepụtara akụkọ zuru oke nke ukwuu na Stats Marketing Content nke azụmahịa ọ bụla kwesịrị ịgbari. Enweghị onye ahịa anyị anaghị ejikọta ahịa ọdịnaya dịka akụkụ nke atụmatụ ahịa ha n'ozuzu ya. Nke bụ eziokwu bụ na ndị na-azụ ahịa, karịsịa ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa (B2B), na-enyocha nsogbu, ngwọta, na ndị na-enye ngwọta. Ekwesịrị iji ọbá akwụkwọ ọdịnaya ị mepụtara iji nye nkọwa niile dị mkpa iji nyekwa ha azịza
B2B: Otu esi emepụta ọgbọ ndu mgbasa ozi ọha dị irè
Tọzdee, Febụwarị 17, 2022 Tọzdee, Febụwarị 17, 2022 Ann Smarty
Mgbasa ozi ọha bụ ụzọ dị mma isi mepụta okporo ụzọ na mmata ika mana ọ nwere ike bụrụ ihe ịma aka n'ịmepụta ụzọ B2B. Kedu ihe kpatara na mgbasa ozi ọha na eze adịghị arụ ọrụ dị ka onye na-ere ahịa B2B yana otu esi emeri ihe ịma aka ahụ? Ka anyị gbalịa chọpụta ya! Ihe ịma aka nke Social Media Lead Generation Enwere isi ihe abụọ kpatara ikpo okwu mgbasa ozi ọha na eze ji sie ike ịtụgharị ka ọ bụrụ ọwa na-ebute ụzọ: mgbasa ozi mgbasa ozi na-akwụsịlata - Mba.